Thumela i-imeyile nge-SMTP kwi-WordPress neMicrosoft 365, Live, Outlook, okanye Hotmail | Martech Zone
I-imeyile evela kumncedisi wakho ayiqinisekiswanga kwaye ayiqinisekiswanga ngeendlela zokuqinisekisa nge-imeyile ezinje SPF or I-DKIM. Oko kuthetha ukuba ezi imeyile zinokuhanjiswa nje ngqo kwifolda ye-junk.
Awunayo irekhodi yazo zonke ii-imeyile eziphumayo ezityhalwa kwiseva yakho. Ngokuzithumela ngeyakho Microsoft 365, Live, imbonakalo, okanye Hotmail iakhawunti, uya kuba nazo zonke kwifolda yakho ethunyelweyo- ukuze ujonge ukuba yeyiphi imiyalezo ethunyelwa yindawo yakho.
Isisombululo, ewe, kukufaka iplagi ye-SMTP ethumela i-imeyile yakho kwiakhawunti yakho yeMicrosoft endaweni yokutyhalwa kwiseva yakho. Ukongeza, ndingacebisa ukuba usete i Yahlula iakhawunti yomsebenzisi kaMicrosoft Olunxibelelwano kuphela. Ngale ndlela, awuzukuba naxhala malunga nokuseta kwakhona i-password eza kukhubaza amandla okuthumela.
Ufuna ukuseta i-Gmail endaweni yoko? Cofa apha
Useto lwe Microsoft zilula kakhulu:
Izibuko le-SSL: 587
Nantsi indlela ejongeka ngayo komnye wabathengi bam, iRoyal Spa (andibonisanga mhlaba wegama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha):
Thumela uvavanyo lwe-imeyile WIth I-WP ye-Plugin elula
Ngoku ungangena kwiakhawunti yakho yeMicrosoft, yiya kwifolda ethunyelweyo, kwaye ubone ukuba umyalezo wakho uthunyelwe!
tags: I-DMARCI-wp smtp elulaukuhanjiswa kwee-imeyilehotmailLiveImicrosoft 365nembonophp imeyilethumela i-imeyileSMTPsmtp iplagispfWordPressImeyile yamagamaiplagi yamagama